सिमा बिʼबाद चर्किरहेकाे बेला डा. महाबिर पुनकाे दमदार आईʼडिया – जसले हुनसक्छ भारतकाे सपना चकनाचुर !।।तपाई लाई कस्तो लाग्छ कमेʼन्ट गर्नुहोस
२०७७ बैशाख २८ यतिबेला भारतले नेपालकाे भुमी मिच्दै तिब्बत जाेड्ने संजाल बिस्तार गरेपछी नेपालभर त्यसकाे चर्काे बिराेध भैरहेकाे छ । यसं प्रसंगमा रा.अा. के का संस्थापक बैज्ञानिक डा. महाबिर पुन मगरले भारत संगको सिमा बिबादको प्रसंगमा प्रतिस्पर्धा गर्न डा. निकै राेचक तथा फरक आईडिया दिएका छन । फेसबुकमा डा. पुन लेख्नुहन्छ:- भारत संगको सिमा बिबादको प्रसंगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा फरक आईडिया पढ्नु होस्. भारतले तिब्बतको सिमा नजिकै नेपालको जग्गा मिचेर मोटर जाने सडक बनाएको भन्ने समाचार आयो. यसको राजनैतिक लडाई गर्ने र समाधान निकाल्ने काम नेताहरुले गर्लान जसको नतिजा निस्कन पनि सक्छ र ननिस्कन पनि सक्छ. एउटा कुरा के प्रष्ट भयो भने भारतले लिपुलेकको नेपाली भुमी जबर्जस्ती हडप्ने एउटा प्रमुख कारण ता भारतको पर्यटन बिकासको लागी कैलाश पर्बत सम्म जाने सडक खोल्ने रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग नै भयो. त्यसैले मैले यह
नेपाल टेलिकमले आज मंगलबारबाट आफ्ना ग्राहकलाई नयाँ सेवा सुरु गर्ने भएको छ । टेलिकमले आजबाट ‘एण्ड अफ कल सेवा’ अर्थात् कल पश्चात आउने ब्यालेन्स सम्बन्धि विवरण जानकारी दिने सेवाको परिक्षण गर्ने लागेको हो । यो सेवा जीएसएम मोबाइलमा सुरु गर्न लागेको टेलिकमले जनाएको हो । यस सेवा अन्तर्गत कल सकिएपछि टेलिकमले बाँकि रहेको ब्यालेन्सबारे जानकारी दिन्छ । जस अनुसार टेलिकमले आज रातिदेखि केहि ग्राहकको मोबाइलमा कल गरेपछि अलर्ट म्यासेज आउँन सक्ने जनाएको छ ।अहिले परिक्षणको रुपमा यो सेवा सुरु ग्रण लागिएको टेलिकमको सूचना प्रणाली सहयोगी निर्देशनालयले जनाएको छ । एनसेलले भने यो सेवा धेरै अगाडी देखि नै सुरु गरिसकेको छ ।यस अघि टेलिकमले मिस्ड कल अलर्ट सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ। टेलि कमले मिस्ड कल अलर्ट सेवा जीएसएम पोष्टपेड तथ पि्रपेड मोबाइलमा उपलब्ध गराएको छ ।
Feb132020 by BasudevNo Comments
वास्तुशास्त्र अनुसार परिवार'का सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्य'द्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडि'एका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्र'का विभिन्न ग्रन्थमा घरको मुख्य'द्वारसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी दिइएको हुन्छ जस'बारे ध्यान दिँदा तनाव, रोग र अनावश्यक खर्चबाट बचाउन सकिन्छ । यसका साथै घरमा शान्ती काय'म रहन्छ । वास्तु शास्त्रमा यस्ता पाँच दोष'बारे बताइएको छ जसका कारण घरमा गरिबी भित्रिन्छ । १. घरको मुख्य ढोका काठको हुनुपर्छ र बा'हिरतर्फ खोलिनुपर्छ । भित्रतिर खोलिने ढोकाका कारण घरका मूलीले तनाव र विभिन्न रोगको सामना गर्नुपर्छ । धातुको ढोका राख्दा धोका पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यद्यपी, फेंग सूईले भने घ'रको ढोका भित्रतिर नै खोलिएको रा'म्रो बताउँछ । फेंग सूईका अनुसार घर'को ढोका भित्रतिर खोलि'
काठमाडौँ, गाउँगाउँमा खुलेका सहकारीदखि धार्मिक सङ्घ, संस्था र सहरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूले समेत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छन् । तर यसरी सञ्चालन भएका एम्बुले.न्स सेवाप्रति आम जनसमुदाय ढुक्क हुन भने सकेका छैनन् । ‘भनेको बेला र आवाश्यक परेको बेला एम्बुलेन्स पाउनै मुस्किल छ । फोन उठ्दैन, उठिहाले पनि एम्बुलेन्स बिग्रेको भन्ने जवाफ पाइन्छ’, धेरैको गुनासो यस्तै सुनिन्छ । उपभोक्ताले खोजेका बेला नपाउने मात्रै होइन, धेरैजसो एम्बुलेन्स त तोकिएको मापद,ण्डअनुसार सञ्चालनसमेत भएका छैनन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७३ ले एम्बुलेन्सलाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरेर एम्बुलेन्सको श्रेणीअनुसार एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सुविधा पनि तोकिएको छ । तर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूमा तोकिएका सुविधाहरू अत्यन्त न्यून मात्रै पाइने गरेका छन् । के–के हुनुपर्छ ‘क’ वर्गक